दाँ’त कि’राले खाएर हैरान हु’नुहुन्छ ? अ’पनाउनुहोस् यी उपा’य ! « गोर्खाली खबर डटकम
२०७७ माघ ७ गते बुधवार प्रकाशित
पा’चन प्रक्रियामा दाँ’तको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । खा’नालाई चपाउन दाँतको सबैभन्दा महत्त्पूर्ण कार्य हुन्छ । दाँ’तले व्यक्तिको सुन्दरतालाई पनि प्रभावित पार्ने गर्छ । तर दाँतको राम्रोसँग हेरचाह र ख्याल गरिएन भने स’मस्या उत्पन्न हुन्छ । कि’राले दाँ’तमा आक्रमण गर्दा त्यसको पीडा निकै हुने गर्छ । दाँतलाई जोगाउनका लागि नियमित ब्रस र खाना खाएपछि कुल्ला आदि कुरा गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसबाहेक दाँत कि’राले खानबाट जोगाउन तथा बलियो बनाउन निम्न कार्य गर्न सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।
कुनै पनि चिज खाएपछि मुख कुल्ला गर्न नबिर्सने । दाँत सही तरिकाले माझ्ने । दाँत माझ्दा नरम बुसको प्रयोग गर्ने । सूर्तिजन्य पदार्थ नखाने । खाना खाएपछि अनिवार्य रूपमा बिहान–बेलुकी दुईपटक दाँत माझ्ने । फ्लोराइडयुक्त मञ्जनले दाँत माझ्ने । चकलेट, कोकाकोला जस्ता चिज खाएपछि अनिवार्य मुख कुल्ला गर्ने अथवा दाँत माझ्ने । ग’र्भवतीले क्या’ल्सियमयुक्त खाना खाने । यस्तै थप जानकारी दिइएका छाै पढ्नुहाेला !
ब्र’स गर्दा नगर्नुहोस् यी ग’ल्ती, नत्र कमजोर हुनसक्छ दाँ’त, यस्तो ब्रस गर्ने सही तरिका: हा’मीलाई बिहान बेलुका दाँ’त माझ्न सिकाइन्छ तर कति टूथपेस्ट लिने भन्ने विषयका बारेमा बा’ल्यकालमा कसैले केही भनेको थियो त ? अमेरिकास्थित सेन्टर फर डिजीज कन्ट्रोल यान्ड प्रिभेन्सनको एक अध्ययनअनुसार, तीनदेखि ६ वर्षसम्मका ब’च्चालाई ब्रशमा मटरको दाना जति टूथपेस्ट हाल्नुपर्छ । दन्तमञ्जनको अधिक मात्राले बच्चाको दाँतलाई हानि गर्न सक्छ । शुक्रवार जारी अध्ययनअनुसार, लगभग ४० प्रतिशत अभिभावक आफ्ना सन्तानलाई निर्धारित मात्राभन्दा बढी टूथपेस्ट दिन्छन् ।
दाँत उम्रिने बेला भएका बच्चालाई कम टूथपेस्ट दिनुपर्छ किनकि अधिक मात्रामा टूथपेस्ट दिँदा उनीहरूलाई डेन्टल फ्लुओरोसिस हुन सक्छ । यो अध्ययन १७ सय बालबालिकामाझ गरिएको थियो । अमेरिकन डेन्टल एसोसिएसनको वेबसाइट अनुसार, यसको ठूलो कारण भनेको टूथपेस्टमा फ्लुओराइड हुन्छ र त्यसले दाँतलाई ब्याक्टेरियाबाट सुरक्षित राख्छ । तर यसको अधिक मात्राले दाँतको माथिल्लो पत्रलाई खियाइदिन्छ । साना बच्चाका लागि टूथपेस्टको कम प्रयोग गर्ने सल्लाह किनकि टूथपेस्ट बाहेक पानी पनि फ्लोराइडको एक स्रोत हो । दाँ’तमा त्यसले पनि असर पार्छ । अध्ययनअनुसार, फ्लोरिससको असर दाँत पलाइरहेका बच्चाको दाँतमा मात्र पर्छ।
यसले दन्त स्वा’स्थ्यमा पूरै असर त पार्दैन तर फ्लोराइडको मात्रा नियन्त्रित नगर्दा दाँतको रंग खुइलिन्छ । यसको अत्यधिक मात्राले दाँतको बनावटमा पनि असर पार्छ । दन्तचिकित्सक भन्छन्, ‘दिनको दुईचोटि दाँत माझ्नु जरूरी छ । पहिलो दाँत आउनेबित्तिकै बच्चाको दाँत सफा गर्न थाल्नुपर्छ । प्रायः ६ महिनामा पहिलो दाँत आउँछ तर त्यतिखेर ब्रश गराउन सकिएन भने मुलायम सूती कपडाले दाँत सफा गर्नुपर्छ ।’धेरै मानिसमा दाँतको एउटा न एउटा स’मस्या हुन्छ । यी तीन सूत्रलाई पालना गरेमा दाँतलाई स्व’स्थ राख्न सकिन्छः हरेक दिन आफ्नो मुख र दाँतको अवस्था आफैं जाँच्ने । दन्तचिकित्सककहाँ नियमित जाने । सरसफाइ र पौष्टिकतामा ध्यान दिने ।
खा’ना खाए लग’त्तै ब्रस गर्ने बानी छ ? आ’जैबाट छो’ड्नुहोस्: हाम्रा क’तिपय यस्ता बा’नी हुन्छन्, जसले हाम्रो स्वा’स्थ्यलाई न’राम्रो असर पु’र्याइरहेका हुन्छ। यस्ता सा’धारण बा’नीको ख्याल नगर्दा स्वा’स्थ्यमा गम्भिर समस्या समेत निम्तिने खत’रा हुन्छ । त्यसैले यस्ता बानी परीवर्त’न गर्नु नै राम्रो मानिन्छ । आज हामी आम मानिसले गर्ने केही गल्तिका बारेमा तपाईलाई जानका’री गराउँदै छौँ । यदी तपाईको पनि यस्तो बानी छ भने हाजैबाट हटाउनु उ’त्तम हुनेछ । सुधार गर्नुहोस् यी बानी ।
खाना लगत्तै ब्रस गर्ने बानी: खाना खाइसके ल’गत्तै दाँत ब्रस गर्ने धेरैको बानी हुन्छ । यसो गर्नु राम्रो मानिदैन् । खाना वित्तिकै ब्रस गर्दा दाँ’तको इनामेल खराब भई दाँत सड्ने तथा टुट्ने र बिग्रिने जोखिम हुन्छ । राति अबेरसम्म जागै रहनु: पर्याप्त मात्रामा नसुत्नु र रातमा अबेरसम्म जागै रहने गर्नाले डि’प्रेसन, मोटोपना, तनाव, एसिडिटी, अपच जस्ता समस्या पैदा हुन सक्दछन् । सधै बोतलबन्द तथा मिनिरल वाटर पिउनु: रसायनिक ट्रिटमेन्ट गरी शुद्धिकरण गरिएको तथा रिभर्स अस्मोसिस पद्धतिद्वारा डिमिनिरलाइज्ड गरी बोतलमा बन्द गरिएको पानीमात्र पिउनाले पानीबाट प्राप्त हुनुपर्ने कयौ लवणहरु शरीरमा प्राप्त हुन सक्दैन । जसका कारण विभिन्न खाले रोग लाग्दछ ।
नङ टोक्नु: अवचेतन रुपमा मुखभित्र औँला छिराएर नङ टोकिरहने बानी धेरैको हुन्छ । यसो गर्दा नङभित्रको फोहोर पदार्थ मुखमा पुग्दछ जसका कारण विभिन्न खाले रो’गको संक्रमण हुनसक्दछ । साथै यसले दाँत र नङमा पनि नोक्सान पुर्याउँछ। धेरै एन्टिबायोटिक तथा पेनकिलर औषधिको प्रयोग: डाक्टरको सल्लाह बिनै धेरै एन्टिबायोटिक तथा पेन किलर औषधिको सेवन गर्नाले शरीरमा प्र’तिरोध विकास हुन्छ। जसका कारण भविष्यमा एन्टिबायोटिक औषधिले नै काम नगर्ने हुनसक्छ ।
नोट: माथि उल्लेखित स्वा’स्थ्य सम्बन्धी जानकारीहरु विभिन्न अनलाइन तथा पत्र-पत्रिकाहरुबाट साभार गरिएको हो । मानिसको शारिरिक अवस्था र समय अनुसार पनि माथि उल्लेखित कुराहरुको उपलब्धी फरक पर्छ । सम्पुर्णरुपमा यहि कुरामा मात्रै भर नपर्नुहोला । माथि उल्लेखित कुराहरु प्रयोग गर्दा तपाईको स्वा’स्थ्यमा थप खराबी देखिए, कृपया तुरुन्त रोकेर स्वा’स्थ्यकर्मीहरुसँग सल्लाह लिनुहोस् । साथै तपाईलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो ? हाम्रो जानकारीहरु अरुलाई पनि देखाउन कृपया सेयर गर्नुहोला । तपाइको एक सेयरले थाहा नभएकाहरुले ज्ञान पाउछन भने हामीलाई पनि सहयोग मिल्नेछ ।
सन्नी लियोनीलाई फ्लप खुवाउने मन्त्रीकी छोरी सपना, हेरौं तस्बिर
श्रीमानलाइ छाडेर छोरासँग बिहे गरेकी रु’सी ब्ल’गर आमा बन्दै…हेर्नुहोस
चन्द्रमामा भेटियो एलियन सैनिक ट्यांक, पृथ्वीमा हमला गर्न सक्ने वैज्ञानिकहरुको आशंका